Nebi Maxamed ma mudan yahay ku dayasho? – Kaasho Maanka
Ka jawaabidda waydiintani way fududahay marka aan dib u eegno dhaxalku nebigu uga tegey dadka haysta diinta islaanka.Laakin waxa mudan in la isla fahmo waydiin kalo dhahaysa yaa mudan in lagu daydo?
Nebi Maxamed wuxu la yimi xeerar u sheegay in samada looga soo dhiibey xeererkaasi waxay bahdil iyo gaboodfal ku ahaayeen welina ku yihiin maanka fayow ee aadanaha.
Nebigu wuxu si toosa raali uga noqday adoonsiga xeerar sharciyaynayana wa u sameeyey.
Wuxuu ogolaaday bir-magaydo aan dagaal ku jirin in la adoonsan karo loo galmoon karo xiligi la doono la jir dili karo ama naftaba laga goyn karo sabab la’aan.
Wuxuu yeeshay nebigu rag iyo dumar adoon ah waxa dhacday inu qof nool hadiyad ahaan u qaadan jirey ama u bixin jirey sido kale waxa dhici jirty inu u galmoon jirey dumar adoon ah, sido kalena u kufsi u gaysan jirey qaar u raggoodi ku hor diley.
Nebigu wuxu kalo guursan jirey una galmoon jirey caruurta aan qaan gaadhka ahayn.
Nebigu wuxu amray in la xasuuqo qabiilooyin dhan oo aan mid laga reebin sido kalena dumarkooda la adoonsado waxa ka mid ah qolooyinkii yuhuuda aha.
Nebigu wuxu si cad o badheedh ah u cunsuriyayn jirey dadka madaw xor ha ahaaden ama adoon u isagu leeyahay.
waxaa dhacday nebi Maxamed laba adoon o madaw dhaafsiistay ama ku gatay hal adoon o diir cad.
Nebigu wuxu dhac dil adoonsi iyo kufsi wadey muddo ku siman 23 sano kadibna waxa hawshi halki kasi waday raggi talada ka dhaxlay ilaa maantana wa socota.
Nebigu wuxuu aadanaha uga tegey dhaxal habaaran oo aan wax tar u lahayn aadanaha marka laga eego dhan walba dalalka islaamku wa kuwa ugu liita aduunka.
QORMO LA XIRIIRTA: Qaabkee Quraanku mucjiso u yahay?
Nebigu wuxu ahaa cunsuri, dilaa arxan daran iyo nin aad u dumar jecel o aan dhaafin xata hablaha aan qaan gaadhka ahayn , wuxu aha nin u ooman daadinta dhiiga aadanaha,keli taliye macangeg ah.
Nebi Maxamed waxba kaama duwanayn hogaamiyhi dhiigyacabka ahaa kana soo jeedey dadka loo yaqaan Tataarka ama mangoliyanka Genghis khan ( 1162-1227).
Nebigu Maxamed waxa si cad u raacay jidkii u jeexay dhamaan urur-rada argagixisada ah ee ka jira aduunka iyo dalalka islaamka badankooda sida ( Al-shabab ISIS Boko-haram Al-qacida Iran iyo boqortooyada Sucuudiga)
Mudane Anigoon ku Aflagaadeen wax kuu sheegayaa inad Joojiso xumaatada iyo beenta aad ka sheegso Diinta Rasuulka NNKH . Mideeda kale Hadii aad tahay qof iLaahay diinta baray Kadaa sida khaldan ee aad u fasiraysid
W/Q: Khaled Hassan 2nd February 2018